शाहरुख खानको ‘जिरो’ मा स्व.श्रीदेवी पनि ! « Ramailo छ
शाहरुख खानको ‘जिरो’ मा स्व.श्रीदेवी पनि !
प्रकाशित मिति : Nov 28, 2018
बलिउड अभिनेता शाहरुख खानको बहुप्रतिक्षित फिल्म ‘जिरो’ २१ डिसेम्बर रिलिज हुँदैछ । होचो कद भएका भुमिका निभाएका शाहरुखको फिल्मको निकै चर्चा छ ।
फिल्म प्रदर्शनत मिति नजिकिदै गर्दा अर्काे कुराले चर्चा पाइरहेको छ । शाहरुको जिरो मा असामाहिक निधन भएकी स्वर्गिय श्रीदेवी पनि देखिने चर्चा छ । किंग खानसँग एक स्पेशल गीतमा श्रीदेवी देखिने भारतिय मिडियामा उल्लखे छ । यो गीतलाई शाहरुख सिक्रेट राख्न चाहन्छन् । यो गोपपिनयता दर्शकको लागि सरप्राइज प्याकेजको रुपमा प्रस्तुत गर्ने शाहरुखको सोच रहेको छ । यो गीत हेर्नको लागि दर्शक हलमै पुग्नु पर्नेछ । श्रीदेवीको निधन अगाडी नै जिरो उक्त गीत छायाँकन गरिएको थियो ।
फिल्म जिरो मा अनुष्का शर्मा, कैट्रिना कैफको मुख्य भुमिका छ । श्रीदेवी भएको जिरोको गीतमा आलिया भट्ट र करिश्मा कपूर पनि देखिने छन् । २०१७ मा करिश्माले सामाजिक सञ्जालमा फोटा सेयर गरेकी थिइन । आनन्द एल रायको यो फिल्ममा श्रीदेवी सहित सलमान खान, काजोल, माधुरी दीक्षित अन्य ठुला कलाकारहरु पनि कैमियो रोलमा देखिने छन् ।